आजको खबर : नेपालमै पहिलोपटक बर्ड फ्लुको कारणले एक युवाको मृत्यु : को हुन् बर्ड फ्लुबाट ज्यान गुमाउने व्यक्ति ? – MySansar
आजको खबर : नेपालमै पहिलोपटक बर्ड फ्लुको कारणले एक युवाको मृत्यु : को हुन् बर्ड फ्लुबाट ज्यान गुमाउने व्यक्ति ?
Posted on May 2, 2019 by राजेन्द्र मगर
आज वैशाख १९ गते बिहिबार। आजका दिनमा विभिन्न अनलाइनहरुमा प्रकाशित समाचारहरुमध्ये हाम्रो नजरमा परेका समाचारहरु यस्ता छन्-
बर्ड फ्लुबाट नेपालमा पहिलो पटक एक जना २१ वर्षिय युवकको मृत्यु भएको छ।
गत चैत १५ गते बर्ड फ्लुका कारण मृत्यु भएको हो।
युवकको र्यालको नमूना टेकुस्थित राष्ट्रिय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला परीक्षणका लागि पठाइएको थियो। बर्ड फ्लुको भएको पुष्टी भएपनि बिस्तृत जानकारी लिनको लागि जापानको एक ल्यावमा परीक्षण गर्न पठाइएको थियो। जापानको ल्याबले बर्डफ्लुको पुष्टी गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएको हो।
नेपालमा पहिलोपटक मानिसमा देखियो बर्डफ्लु, २१ वर्षीय युवकको मृत्यु भन्दै नेपाल लाइभले लेखेको छ।
बर्ड फ्लुको कारण युवकको मृत्यु भएको जानकारी दिएपनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ति युवा को र कहाँका थिए जानकारी दिएको छैन्। उनी कस्तो अवस्थामा थिए भन्ने बारेमा पनि जानकारी दिएको छैन्।
त्यसो भए कहाँबाट कसरी बर्डफ्लु सर्‍यो ती युवकलाई ?’
‘के ती युवक विदेशबाट आएका थिए त ?
को हुन् बर्ड फ्लुबाट ज्यान गुमाउने व्यक्ति : कुखुरा फार्म सञ्चालक? मासु पसले? मासु खाने कि विदेशबाट आएका? भन्दै पहिलोपोस्टले लेखेको छ।
बर्ड फ्लुले मानिसको ज्यान गएपछि मानिसहरुले कुखुराको मासु खानु हुन्छ कि हुदैँन भनेर त्रास बढेको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले सत्तरी डिग्री सेल्सियसभन्दा माथिको तापक्रममा पकाएर मासु खान हुने जनाएको छ। मासु राम्ररी नपकाइ खाएको अवस्थामा भने यो रोग मान्छेमा सर्छ।
बर्ड फ्लु चलेका बेला कुखुराको मासु खाने कि नखाने? भन्दै सेतोपाटीले लेखेको छ।
बर्डफ्लुका यस्ता छन् लक्षण र बच्‍ने उपायहरु भन्दै बाह्रखरीले लेखेको छ।
यस्ता छन बर्ड फ्लुका लक्षणहरु।
यसरी सकिन्छ बच्न
७. कुखुराको मासु राम्ररी पकाएर खाने –कम्तीमा ७० डिग्री सेल्सियस भएमा भाइरस मर्दछ।
डा बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्तिसँग उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको संघीय समाजवादी फोरम पार्टी एकता गर्न यादवसहित फोरमले नै सरकार छाड्नुपर्ने शर्त राखेका छन्। तर भट्टराईको शर्त यादवले मानिसकेका छैनन्। यादवले शर्त माने यही २३ गते पार्टी एकता हुने बताइएको छ।
बाबुराम भट्टराईको शर्तः उपेन्द्रले सरकार छाडे पार्टी एकता घोषणा वैशाख २३ गते भन्दै काठमाण्डुं प्रेसले लेखेको छ।